Svondo 10 Gumiguru 2021
Zvakapakirirwa Cocktails Boho Ras inotengesa mapaketi akagadzirwa akagadzirwa nemweya yemuno yeIndia akanakisa. Icho chigadzirwa chinotakura Bohemian vibe, iyo inotora iyo isingazivikanwe yehupenyu hwemhizha uye zvinoonekwa zvechigadzirwa ndizvo zvinoratidzwa zvebuzz iyo mutengi anowana mushure mekunwa iyo jogo. Iyo yakakwanisa kunyatsogona kuita iyo midpoint uko Global uye Local inosangana, kwavanofungidzira kuumba Glocal vibe yechigadzirwa. Boho Ras inotengesa midzimu yakachena mumabhodhoro e200ml uye akaiswa mumatare mu200ml nemabhodhoro 750 ml.
Mugovera 9 Gumiguru 2021
Podcast Nhau chikumbiro chekubvunzurudza ruzivo rwekuteerera. Iyo inokurudzirwa neiyo Apple apula flat dhizaini nemifananidzo kuratidza iyo mabhuruku emashoko. Zvinotaridzika kumashure kune magetsi emhando yebhuruu sechinangwa chekuita kuti zvidhinha zviratidzike. Kune mashoma mashoma graphic zvinhu, chinangwa, kuita kuti application ive nyore kushandisa pasina kukanganisa mushandisi kana kurasikirwa.
Kurongedza Zvekudya Zvehutano Zvekorea
Chishanu 8 Gumiguru 2021
Kurongedza Zvekudya Zvehutano Zvekorea Darin yakagadzirirwa kusunungura vanhu vemazuva ano kubva mukusagadzikana kune vekuKorea vehutano chikafu zvigadzirwa munharaunda yekuneta, ine zvirinyore, kujekesa kujekesa mukutakura mapakeji kune zvinonzwisisika zvevanhu vemazuva ano, kusiyana nemifananidzo isina kutumwa iyo yakashandiswa nevekare veKorea hutano hwezvitoro zvekudya. . Zvese zvigadzirwa zvakagadzirwa kubva motifs kweropa kutenderera, muchiona chinangwa chekupa hutano uye hutano kune vakaneta makumi maviri nemakumi matatu.
China 7 Gumiguru 2021
Webhu Dhizaini Uye Ux
Chitatu 6 Gumiguru 2021
Webhu Dhizaini Uye Ux Iyo Sí, Me Quiero webhusaiti inzvimbo iyo inobatsira kuve pachako. Kuita chirongwa ichi, kubvunzurudza kwaifanira kuitwa uye mamiriro emagariro nemagariro zvine hukama nevanhukadzi aifanira kuongororwa; kufungidzira kwake munharaunda uye iye naiye. Izvo zvakagumiswa kuti dandemutande raive mutsigiro uye raizoitwa nenzira yekubatsira kuzvida iwe. Mukugadzirwa kwacho kunoratidzwa kuve nyore nemataira asina kwazvakarerekera anoshandisa kusiyanisa kutsvuka kutarisisa zvimwe zviito, mavara emhando yebhuku rakabudiswa nemutengi. Iko kukurudzira kwakabva kuunyanzvi hwekugona.
Dhizaini Rewaini Dhizaini
Chipiri 5 Gumiguru 2021
Dhizaini Rewaini Dhizaini Kuedza nekunwa waini haisi nzira isingamboperi inotungamira munzira itsva uye zvinonhuwirira zvinopesana. Iyo yekusagadzikana kutevedzana kwe pi, iyo isina ruzivo nhamba uye nemagumo asingagumi asingazivi iyo yekupedzisira yavo yaive kurudziro yezita rewaini idzi pasina sulfites. Iyo dhizaini inotarisira kuisa zvimiro zve3,14 zvewaini zvinotevedzana munzvimbo yekuviga panzvimbo pekuvanda pakati pemifananidzo kana magirafu. Ichitevera minimalistic uye yakapusa nzira, iyo label inoratidza chete hunhu chaihwo hwewaini echisikigo sezvavanogona kucherechedzwa mubhuku reOenologist.
Tango Pouch Chikwama, Bag Remanheru Ndoimwe China 9 Zvita
1x3 Tafura Yekofi Chitatu 8 Zvita
Decor Photoinstallation Chipiri 7 Zvita
Zvakapakirirwa Cocktails Podcast Kurongedza Zvekudya Zvehutano Zvekorea 3D Animation Webhu Dhizaini Uye Ux Dhizaini Rewaini Dhizaini